बागलुङको प्रजिअमा शेषनारायण पौडेल आउदै, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङमा पनि नयाँ प्रजिअ ! – ebaglung.com
बागलुङको प्रजिअमा शेषनारायण पौडेल आउदै, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङमा पनि नयाँ प्रजिअ !
२०७५ बैशाख १३, बिहीबार १४:४५	Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७५ बैशाख १३ । गृहमन्त्रालयले आज केहि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गरेको छ । बागलुङमा करीव एक महिना देखी रिक्त रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रजिअ शेषनारायण पौडेललाई सरुवा गरेको छ ।
प्रजिअ पौडेल यस अघिपनि बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (उपसचिव) रहेर काम गरिसकेका छन् । बागलुङ जिल्लामा कार्यरत रहँदा जिल्लाबासीबीच निकै लोकप्रिय रहेका प्रजिअ पौडेल, बागलुङ जिल्लाको प्रजिअमा प्रथम श्रेणी सहसचिव सरहको पदस्थापन भएपछी पौडेल रामेछाप सरुवा भएका थिए ।
यस्तै म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङ जिल्लाहरुका प्रजिहरुपनि सरुवा गरिएको छ । आज गरिएको सरुवा अनुसार म्याग्दीका प्रजिअमा कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशक लिलाधर अधिकारी, पर्वत जिल्लाको प्रजिअमा कास्कीका सप्रजिअ गुरुदत्त ढकाल र मुस्ताङको प्रजिअमा धनुषाका सप्रजिअ शिशिर पौडेल रहेका छन् ।
आजको तस्वीर : मैलेपनि पढन पाउनु पर्छ…!
बेस्सरी घट्यो शिकारको दाम : १३ लाखको झारल सवा लाख, नाउरको दाम ११ लाखबाट घटेर डेढ लाख !